गणतन्त्रमा पनि राजावादीहरु खुसी हुनु राम्रो संकेत होइन ।
देशमा राजा फर्किने सम्भावना त दूरदूरसम्म पनि छैन । यस्तो अवस्थालाई ‘असम्भव अवस्था’ भन्दा पनि फरक नपर्ला । तर यस्तो अवस्थामा पनि आजभोलि राजावादीहरु जसरी खुसी भइरहेको देख्छु, त्यो देख्दा त यस्तो लाग्छ मानौँ, राजा फर्किनेवाला होइन, फर्किसकेका छन् । गणतन्त्रमा पनि राजावादीहरु खुसी हुनु राम्रो संकेत होइन ।
अस्ति एउटा पार्टीमा गएको थिएँ । राजावादीहरु पार्टीमा समेत खुसी थिए । नाचीनाची चिकेन रोस्ट टोकिरहेका थिए । एउटालाई गएर सोधेँ, “क्या हो नेताजी, आजभोलि त कमल थापाहरु धेरै खुसी भएको देख्छु । कारण के होला ?”
नेताजीले दाहिनेतिरको दाातबाट हड्डी कर्‍याप्प गर्दै भने, “खुसी हुनु स्वाभाविक हो । राजाको शासनमा हामी जे–जे गर्नुपर्छ भन्दै थियौँ, त्यो अहिले यही शासनमा पूरा हुँदै छ । राजधानी जहाँ हामी भन्छौँ, त्यहीँ रहने भयो । प्रदेशको नाम हामी जे भन्थ्यौँ, त्यही हुने भयो । यति भएपछि हामीलाई अरु के चाहियो ? यसै खुसियालीमा ल लगाऔँ चियर्स !” दायाँबाट उनले पेग पनि उठाए ।
मैले पनि पेग उठाएँ । साथै, प्रश्न पनि गरेँ, “तर राजाको शासनकालजस्तै भए पनि राजा त छैनन् नि । बिनाराजा तपाईंहरु कसरी खुसी हुन सक्नुहुन्छ ?”
“अब राजाका मामिलामा पनि हामीलाई कुनै समस्या छैन,” घााटीबाट पेग ठेल्दै उनले भने, “हामीले एउटा राजा मागेका थियौँ । यहाँ त दर्जनौँ राजा पाएका छौँ । एउटा माग्नेले दर्जनौँ पाएपछि समस्या कहाँ रह्यो ? होइन र ? ल, यसमा पनि अर्को चियर्स गरौँ ।” उनले अर्को पेग उठाए ।
राजावादीको त्यो खुसी देखेर मलाई लाग्यो, सरकारले ल्याएको सुखी नेपाल, खुसी नेपाली नाराको आधा भाग यहीँ पूरा हुँदै छ ।